ကျနော်တို့ညံ့တာပါ နော့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျနော်တို့ညံ့တာပါ နော့်
Posted by ရာမညသား on Aug 30, 2011 in Copy/Paste |9comments
ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မြန်မာ့ အမွေ အနှစ်လေ ဗျာ သိတယ်မဟုတ်လား? ကျနော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ အခြားနိုင်ငံအတော်များများနှင့် နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် သဘာဝ သယံဇာတ အမွေအနှစ် ပစ္စည်း အလွန်ပေါကြွယ်ဝ တဲ့နိုင်ငံပါ ၊ ( သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ ၊ ကျွန်းသစ် နှင့် အခြား သစ်တော ထွက် ပ စ္စည်း တွေ ၊ ရေမြေ၊ စပါး ပေါ ကြွယ်ဝ တယ်နောက် ရေနံ ၊ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့၊ အလွန် အလွန်ကိပြေါကြွယ်ဝ တယ် ၊။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့တစ်နစ်ဝင်ငွေကို ကျနော်တို့နိုင်ငံ ရဲ့ လူဦးရေ သန်း (၆၀) လောက်နဲ့စားကြည့် ပါ ။ပြည်သူ တစ်ယောက်ခြင်းဆီရမဲ့ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ဟာမိသားစု တစ်စု ချောင်ချောင်လည် လည် နဲ့ နိုင်ပါတယ် ၊ ထာပါပြောနေလဲ ငပြောပဲ ဖြစ်မယ်၊ သူတို့ ပြည်သူတွေကို မပေး ဘူးပဲ ထားပါဦး နိုင်ငံ ကို ဖွိ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘက်တွေမှာသား သုံးစွဲ့ပြီး နိုင်ငံ ကိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ တွေကိုအလုပ်ပေးနိုင်မယ် ဆိုရင် အလုပ်လက်မဲ့ နဲပါးလာမယ်နဲပါးလာတာနဲ့အမျှ လူတွေ ချောင်ချောင်လည်လည်နဲ့ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မယ် လို့ထင်ပါတယ် အခု ကျနော်တို့ရွာမှာဆို ခိုးဆိုးလု ရက်မှု တွေ အတော်များများ ဖြစ်နေပါတယ် ၊ ဆိုင်ကယ်တွေလု လူတွေသက် အဓမ္မ မှာတွေ ဖြစ်နေပါတယ် ဒီလိုဖြစ်လာတာဟာ သူတို့တွေ မှာစားစရာမရှိ ၊ နေစရာ မရှိတော့ လုပ်မိလုပ်ရာလုပ်တာပဲ့လို့ထင်ပါတယ်၊ ဒါဟာ သူတို့ မှာအလုပ်မရှိ အလုပ်မရှိတော့ သူတို့တွေ ၀င်ငွေမရှိ ၀င်ငွေ မရှိ ၊လို့ ဖြစ်လာတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ဒါတွေ ဖြစ်နေတာကို နောက်ကြောင်းပြန်လိုက် လိုက်ရင်သူတို့ ကိုနိုင်ငံတော်က ထောက်ပံ့ မှုတွေမပေးကြလို့ပါ၊ သူတို့ကိုအလုပ်တွေမပေးကြလို့ပါ ၊ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခြေ အနေတွေ ကို လည်းပြန်ကြည့်ကြပါဦး အကုန်လုံး ၀ရန်းသုန်းကားတွေဖြစ်နေတယ်၊ ကျနော်တို့ကို စီးပွားရေး၊ပညာရေး၊ လူမှုရေး အဘက်ဘက်ကဖိနှိပ်နေတာ တွေ၊၊၊ ဒါတွေဖြစ်နေတာ ဟာ ကျနော်တို့ ညံ့ လို့ပါပဲ ကျနော်တို့ နိုင် ငံ့ ဟာ အခု လို့ လက်တစ်ဆုပ် စာလောက်ရှိ တဲ့ ( တစ်ဘို့ ထဲ သမား) တွေ ရဲ့လက်အောက်မှာ ခေါင်းငုပ်ခံနေရတာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ပါပြီ ဒါဟာ သူတို့တော်လို့ မဟုတ်ပါဘူး ကျနော်တို့ညံ့လိုပါပဲ ဘာဖြစ်လို့လဇဲ လို့ မေးရင် ပြောစရာတွေ တောင်လိုပုံ သွားလိမ့်မယ် ဒါကြောင့် ကျနော်ဒီလောက်ပဲပြောတာပါ၊ လူကြီးမင်းတို့လည်းစဉ်းစားကြည့် ကြပါဦး********* ကျနော်ကတော့ အများအားနဲ့ဆို သူတို့ ဘာခံနိုင်မှာလဲ ?????? လူကြီးမင်းတို့ ကျနော်တို့ လူငယ်တွေအားနဲ့ ဆို သူတို့က ဘာမို့လို့လဲ ၊ ကျနော်တိုဘာသာ ကိုယ့်အား ကိုယ် ကိုးပြီးဖောက်ထွက်မယ်ဆိုရင် ရနိုင်မလား ?????????လူကြီးမင်ရော ရနိုင်မယ်လို့ထင်လား၊၊၊?????????????????
ရာမညသားရေ—အုပ်ချုပ်သူတွေသာအကျင့်ပျက်တာမဟုတ်ပါဘူး သာမန်အရပ်သားတွေကပါ အကျင့်ပျက်နေလေတော့ ကောင်းကြရောပေါ့နော့။ဒါပေမယ့် ရာမညသားပြောသလိုသာအားလုံးညီညွတ်ခဲ့ကြရင် ပြောနေစရာတောင်မလိုတော့ပါဘူး။ခွေးတွေပြေးရာတာဝက်ပြေးပေါ့–
ဒို့လဲပြည်ပမှာဘဲသွားအလုပ်လုပ်နေရတယ် အမှန်ပြောရယင်ကျွန်ခံနေရတာပါ ………
ဥာဏ်တုံးသူတွေ၊ အချောင်ခိုချင်စိတ်တွေ များလာတော့အဲလိုဖြစ်မှာပေါ့
ဂျီအက်အမ်ကိစ္စ ရုံးကိုသွားပြောတော့ အဲဒီကပြန်ပြောတာက
သွားပြောတဲ့ကိစ္စကတော့ ခု၅သိန်းဖုန်းတွေကမှ လိုင်းမိသေးတယ်၊ ၁၅သိန်းပေးဝယ်ထားရတဲ့ အရင်GSMတွေက လိုင်းမမိဘူးလို့ ပြောတာတဲ့
(“Every nation has the government it deserves.“)
Joseph de Maistre (1753-1821) wrote in 1811:
လူထုဟာ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရပဲရတယ်..။
Joseph de Maistre (1753-1821) wrote in 1811: “Toute nationale gouvernement qu’elle merite.” (“Every nation has the government it deserves.”) De Maistre was credited with the saying in the 19th century, but it became popular in the United States in the 20th century, frequently without credit to De Maistre.
အဲဒါကျနော် ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်.. သူကြီးပြောတာ…။
ကိုကို မမ ဦးဦး ဒေါ်ဒေါ်တို့ရေ .. အဲဒါဖြစ်နိုင်ပါသလား….?
ကျနော်ကတော့ အများအားနဲ့ဆို သူတို့ ဘာခံနိုင်မှာလဲ ?????? တဲ့လားဟင် … ။ အများအားတဲ့လား … ဟွန့်…အဲ့ဒီအများက တကယ်တမ်း ကိုယ်တယောက်ထဲ ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာ ကြို တွေးမိရဲ့လားဟင်
ပါးစပ်ကတော့ ပြောနေကြတယ် … အားမတန်လို့ မာန်လျှော့နေရတဲ့ လူတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ .. တကယ်တမ်း နှဖူးတွေ့ ဒူးတွေ့ ဟေ့ ဆိုလို့ကတော့ … တိုင်ပင်စရာမလိုဘူး အလျိုလျို ကိုယ်လွတ်ရုန်းကြရော … အဲ့ဒီလို ခံရဖူးတယ်…. ။ သာပေါင်း ညာစားတွေကများတယ် …. ။
“ကျနော်ကတော့ အများအားနဲ့ဆို သူတို့ ဘာခံနိုင်မှာလဲ ? “Absolute right if it is happen . But
3 person in2group of us make the following sentence true. “လူထုဟာ သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရပဲရတယ်..။”
kai ပြောသလို ကျူပ်လဲမြင်မိတယ်။ လေ.လာမိသလောက်ပေါ.နော..။ မတရားမှုခံရရင် ၊ ကြုံနေရင်၊ မြင်နေရရင် အမှန်အတိုင်းပြောရဲရမယ်၊ လုပ်ရဲရမယ်၊ ဖြေရှင်းရဲရမယ်။ ဒီင်္လိုစိတ်မျိုး ၊အလေ.အထမျိုးတွေ က ဒီမိုကရေစီမှာ အခြေခံအကျဆုံးလို. ကျူပ်ထင်မိတယ်။ ဒီစကားပြောလို. ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ကျူပ်အများကြီးမသိတာ အမှန်။ တိုင်းပြည်ထဲမှာရော ဒီမိုကရေစီဆိုတာ အော်နေပေမယ် သေချာမသိတဲ.သူတွေအများသား။ ကိုယ်တောင်သေချာမသိတဲ. ဒီမိုကရေစီကြီးကို မသိပဲနဲ.တောင်းတော. ဘယ်သူကပေးမှာတဲ.လဲ။ ကဲ..မတရားမှုခံရမယ်တဲ. ၊ ကျူပ်တိုပြောမယ် တောင်းဆိုမယ် လွတ်လပ်စွာပြောမယ်။ ဒီလိုပြောလို.ဖမ်းမယ်ဆိုရင် (ညီညွတ်ကြမယ်ဆိုရင်ပေါ.) တစ်ယောက်ဖမ်းရင် နောက် ၂ ယောက်ပြောပြီးအဖမ်းခံ။ ကဲ ကုန်ကုန်ပြောမယ် ပြည်သူတွေအကုန်လုံး နီးစပ်ရာထောင်တွေမှာ အဖမ်းခံဖို. တန်းသာစီနေကြတော.။ သူတို.ဖမ်းနိုင်ဖို.တော.မမြင်ဘူး ထောင်မဆန်.လို.။ ဒါဆို မတရားတဲ.ကိစ္စတစ်ခုကို သူတို.ဖြေရှင်းပေးဖို. အလားအလာကောင်းသွားပြီ။ နောက်လဲ သိပ်မလုပ်၇ဲကြတော.ဘူး။ ဒီလို စုဖွဲ.လုပ်တတ်တာမျိုး၊ မဟုတ်မခံ စိတ်မျိုး နည်းကြသေးတယ်ဗျ။ ဒါကလဲ အကြောက်တရားသွင်းပေထားတာ နှစ် ၂၀ ကျော်ဆိုတော.လဲ…
အဓိကအချက်သည် မည်သည့်အချိန်မဆို နိုင်ငံသားတိုင်းသွေးစည်းညီညွတ်ဖို့လိုအပ်နေပါတယ်၊ရာဇ၀င်လူဆိုးပြောသလို ပြည်သူတွေအကုန်လုံးနီစပ်ရာထောင်တွေမှာ အဖမ်းခံဖို့တန်းသာစီနေကြတော့….အဖမ်းခံဖို့တန်းစီဖို့မပြောနဲ့ နိုင်ငံရေးအကြောင်းကျယ်ကျယ်လောင်လောင်ပြောရဲတဲ့သူတောင်ရှားပါးနေပါပီ၊ပင်နီတိုက်ပုံနဲ့ကချင်ပုဆိုးလေးဝတ်ပီးဘုရားပေါ်တတ် ဘုရားဖူးကြည့်ပါလား…ပုဆိုးခြုံပီးလက်သီးပုံးပြနေလို့ကတော့ အလကားပါပဲ…